TS ဝန်တင်လက်လှည့်စက် - Gear ကို, ယာဉ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, Recovery ကိုတပ်ဆင်ခြင်းတပ် ချ. ဝန်တင်လက်လှည့်စက်,
ATV / UTV ဝန်တင်လက်လှည့်စက်
လှေ & လက်ဝန်တင်လက်လှည့်စက်
Gear ကိုတပ် ချ.
ခေါင်မိုးတဲ & နေကာ
နောက်ဘက်ဘား & ကားဆွဲဆက်စပ်ပစ္စည်း
Recovery ကိုပစ္စည်းများ & သိုင်းကြိုး
သက်တံ့ & ဖျခြေချင်း
ဂျက် & LIFT ပစ္စည်း
air ကို Compressor
Zhejiang TS ဝန်တင်လက်လှည့်စက် Tools များထုတ်လုပ်ခြင်း Co. , Ltd မှကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်ကျော် 12 နှစ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောဝန်တင်လက်လှည့်စက်နှင့်4×4ဆက်စပ်ပစ္စည်းတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့် 17500lbs, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုး, သဲပုဒ်, နွားကိုဘားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပစ္စည်းများမှ 2000lbs ထံမှဝန်တင်လက်လှည့်စက်ထုတ်လုပ်ရန်နေကြသည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်လေးဘီးပြေးကားများနှင့်ချွတ်-လမ်းမော်တော်ယာဉ်များအတွက်အသစ်က4×4ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့လမ်းအပေါ်အမြဲရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ဖောက်သည်မော်တော်ကားဖြေရှင်းချက်တို့နှင့်ကြီးသောတန်ဖိုးကိုကုန်စည်များကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ "ထိပ်ဆုံးရဲ့အရည်အသွေး & ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း" ကအားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ် OEM သွားရောက်ကြည့်ရှုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သင်တစ်ဦးလက်လိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်အချိန်မဆိုကျနော်တို့သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက်အကောင်းဆုံးဂီယာဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
4x4 RECOVERY ဂီယာ
အသစ် winch 12000 / 13500lbs ရေစိုခံနိုင်မှုအပြည့် ...
hi lift lift jack / shovel / recovery
သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင်တစ် ဦး ဝန်တင်လက်လှည့်ကွက် fit ဖို့ဘယ်လို
ကြောက်စရာဘာမှမရှိဘူး၊ ငါတို့ NCP စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရလိမ့်မယ်။
Jindong စက်မှုဇုန်ဧရိယာ, Jinhua စီးတီး, Zhejiang, တရုတ်
အခုတော့ကြှနျုပျတို့ကို Call: 13085656052
လျှပ်စစ်ဝန်တင်လက်လှည့်စက်, 4x4 ဝန်တင်လက်လှည့်စက်, ဝန်တင်လက်လှည့်စက်သည်ဒြပ်ကြိုး, SUV ဝန်တင်လက်လှည့်စက်, ထရပ်ကားဝန်တင်လက်လှည့်စက်, recovery ကိုဝန်တင်လက်လှည့်စက်,